Indlu encinci eDowntown New Bern - I-Airbnb
Indlu encinci eDowntown New Bern
Indlu encinci yabucala ebekwe kanye kumbindi weSithili seMbali yeDowntown. Hamba uye kwiindawo zokutyela ezininzi, imivalo, indawo engasemanzini, kunye neTryon Palace. Umnyango wabucala owahlukileyo ukusuka kwiyadi yangasemva kwaye unokufikelelwa nangaliphi na ixesha ngekhowudi ephambili. Indawo yokuhlala, ikhitshi (akukho kupheka) kunye negumbi lokuhlambela kumgangatho wokuqala kunye nebhedi yokumkanikazi phezulu kwindawo evulekileyo yomgangatho ophezulu. Indawo yokupaka iyafumaneka kwisiza. Izilo eziziphethe kakuhle kulungile. Beach cruiser bikes ziyafumaneka. Eyona nto ikhululekileyo kwiindwendwe ezi-1 okanye ezi-2 kodwa zinokuthatha ezi-3.
Le ndlu incinci ikwiyadi yangasemva yendlu yam yembali ye-1865 ekufuphi nekona yeSitrato iHancock kunye neBroad Street kumbindi wedolophu yaseNew Bern. Yonke indawo isesandleni sakho kwaye ibucala. Indawo ikhululekile kakhulu kubantu aba-1 okanye aba-2 kodwa inokuthatha aba-3.
4.92 out of 5 stars from 612 reviews
4.92 · Izimvo eziyi-612
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi612
Indlu encinci ikwiyadi engasemva yendlu eyimbali eyakhiwe ngo-1886 entliziyweni yeSithili seMbali seNew Bern ecaleni kweMyuziyam yoMlilo kunye nokuhamba ngokulula kwemizuzu emi-2 ukuya edolophini.
Ndidla ngokunika iindwendwe indawo ukonwabela uhambo lwazo. Ndiyavuya ukwabelana nawe ngayo nantoni na ofuna ukuyazi malunga neNew Bern kwaye uhlala apha ukusukela ngo-1999 kwaye zininzi izinto ezimnandi onokuthi uzenze edolophini..okanye hayi! Iibhayisekile ze-Beach cruiser ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe.
Ndidla ngokunika iindwendwe indawo ukonwabela uhambo lwazo. Ndiyavuya ukwabelana nawe ngayo nantoni na ofuna ukuyazi malunga neNew Bern kwaye uhlala apha ukusukela ngo-1999 kwaye z…